Wayland waxay ku imaan doontaa ugu horeyn Fedora 21 | Laga soo bilaabo Linux
Wayland waxay ugu imaan doontaa si caadi ah Fedora 21
diazepam | | Qaybinta, Noticias
* # 1306 F21 Nidaamka Isbedelka Weyn: Wayland - https://fedoraproject.org/wiki/Changes/Wayland (mitr, 17:50:20) * LAGU HELAY: Isbedelka Wayland waa la ansixiyay (+ 7) (mitr, 17:53:52) )
Khadkani wuxuu u muuqday mid lagu daabacay mid ka mid ah meelihii liiska boostada kaas oo soo koobay mowduucyadii looga hadlay intii lagu gudajiray shirkii Arbacada ee FESCo (guddiga hogaaminta injineernimada Fedora). Waxay xaqiijineysaa waxa badan oo la filayo: Fedora 21 waxay u isticmaali doontaa Wayland si toos ah GNOME 3.14 desktop. Fedora 20 (oo leh GNOME 3.10) waxay leedahay taageero tijaabo ah iyada oo loo marayo xirmada mutter-wayland. Waxaa la filayaa in Fedora 21 Gnome Shell wuxuu u shaqeeyaa sidii laxamiistaha, mutter-wayland wuxuu si buuxda isugu dhafan yahay iskudhafka, gnome-control-center iyo gnome-settings-daemon waxaa lagu geeyay server-ka cusub ee garaafyada, gdm maareynta kal-fadhiyada, iwm.
Intaa waxaa sii dheer, Fedora 21 ayaa ku rari doonta Xorg Server nooca 1.16, oo leh taageerada aasaasiga ah ee XWayland, taas oo suurtogal ka dhigaysa in lagu ordo codsiyada X ee Wayland. Sikastaba, si aad fikrad uga hesho wadada wali harsan in la safro, halkan waxaad ku haysaa wax kasta oo ka maqnaa GNOME 3.12 (waxyaabaha qaar waa la xaliyaa sidaa darteedna waxay diyaar u noqon karaan GNOME 3.14). Ugu dambeyntiina, kuwa doonaya inay wax badan ka ogaadaan sii-deynta mustaqbalka ee GNOME 3.14 ayaa booqan kara mashruuca wiki.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Qaybinta » Wayland waxay ugu imaan doontaa si caadi ah Fedora 21
Haddii Fedora uu la yimaado Gnome 3.14 iyo KDE Frameworks 5 waxay noqoneysaa sii deyn weyn markii ugu horreysay taariikhda ee Server-ka Sawirka dheer ee la wada sugayay ee Wayland! Ma sugi karo inaan cusbooneysiiyo Fedora!
Ma garanayo sida nooca hadda jira ee 20 uu u socon doono, laakiin noocyadii ugu dambeeyay ee Fedora ma ahayn inay toogtaan gantaallo. Waxaa laga yaabaa inay aad khatar u tahay in la sii wado Wayland hadda.
In kasta oo aanan isku dayin nooca 20 ...
Ku jawaab Tesla
Ma aqaano waxaad isku saleyneyso inaad dhahdo taas, nuqulkii ugu dambeeyay ee iila muuqday "xun" aniga ee fedora wuxuu ahaa nooca 15.
Ku jawaab juanfgs
Laakiin KDE 5.0 kuma shaqeyn doono waddada (noocyada hore ugu yaraan)
Waan ka xumahay, laakiin waxaan u maleynayaa in Fedora 20 ay keento GNOME 3.10 (wixii aan ka fahmay halkan: http://docs.fedoraproject.org/en-US/Fedora/20/html/Release_Notes/sect-Release_Notes-Changes_for_Desktop.html#sect-Desktop)
Ku jawaab ergo
#OFFTOPIC maxaa ku dhacay maqaalka VPS (miyay tirtireen?)
Haa, qoraagu wuu codsaday.
ma u xumaan doontaa sida f18? : qoslaa
Halkan waa http://www.webupd8.org/2014/03/how-to-install-gnome-312-in-fedora-20.html
haha raali ahow, faalintu adiga kuuma ahayn
Waxaan wali sugayaa gnome 3.12 in loo sii daayo casriyeynta fedora 20, ma doonayo inaan qatar galiyo repo corp-ta jirta, marka laga reebo 3.12.2
Waxaan u maleynayaa in qof uusan sifiican wax u aqrin, waxaan dhahay ma doonayo inaan qatar galiyo isticmaalka corp repo-ka meesha ku taal, ilaa ay ka ahaato "amaan"
Fedora waxay noqon doonaan dhiigbax gees iyo wax kasta oo aad rabto, laakiin uma maleyneyno inay tahay waqtigii loo isticmaali lahaa wayland si aan caadi aheyn (taas oo aan la mid ahayn in la yiraahdo uma maleynayo inay si macquul ah u shaqeyn doonto)
xorg mudo dheer ayuu jiray hadana si fiican ayuu u shaqeeyaa Uma maleynayo in qofna u dhimanayo inuu in yar sugo.
Reply to xarlieb
Arrintu maaha inaad sii sugto, haddii aad sii sugto Ubuntu ayaa marka hore meesha ka saaraysa, haddii aanay hore u jirin, MIR. Haddii MiR horay u soo baxo oo uu haysto, sida aan u fahmay, aqbalaadda kuwa wax dhisaya, MiR waa in lagu dhex daraa distoorka kale, isha ayaa ah waxa aan u malaynayo ... Muddooyinkan dambe dheg uma dhigin dunida Linux, waan dhididaa, waxaan rakibaa oo keliya distoorka aan u baahanahay waana intaas
Jawaab Mr. X
Uma maleynayo inay tahay su'aal ah kumbuyuutarrada muuqaalka ah ee marka hore soo baxa. Wayland waa waqti dheer oo horumar ah waxaana taageera bulshada. In kasta oo Mir uu yahay Canonical u gaar ah Ubuntu mana u maleynayo in mashaariicda sida Debian, Red Hat iyo kuwa kale ay rabaan inay la jaanqaadaan qaybintooda.
Qeybinta qaar ayaa horeyba u waday taageerada tijaabada ah ee Wayland labadaba Gnome iyo KDE labaduba waa diyaar / udiyaarin Wayland.
Iska ilaali! Ma dhahayo Mir ma khusayso ama waa laga badbadiyay. Haddii Canonical ay rabto inay horumariso, waxay haysataa lacagtaada iyo shaqaalahaaga inay sameeyaan.
Nvidia way taageeri doontaa labadaba, amd garan maayo XD
Waxay umuuqataa inay sifiican ushaqeyneyso
Waa tan hage ku saabsan sida loo helo shayga ka shaqeynaya Archlinux
Shaashadda shaashadda waa gnome leh wayland
'Ugu ​​talagal' macnaheedu maahan "si caadi ah" ama taasi si sax ah cilad awgeed nooc ka mid ah nooca aan la ogaan karin ee F21 uu la soo baxayo Wayland?
Ma aqaano haddii aad kaftamayso: o, laakiin sida caadiga ah macnaheedu waa "asal ahaan" waxaanan u malaynayaa inay sidaas tahay.
Waxay noqon kartaa aragtidaadii ugu dambaysay, laakiin waxaan arki doonaa haddii isbeddelkan daqiiqadda ugu dambeysa uu faa'iido u yeesho Fedora (tallaabada ugu wanaagsan ee Red Hat Inc. ay sameysay si ay u taageerto Wayland illaa hadda).
Tani waa falcelintayda.
Qof waa inuu ku dhiiradaa inuu qaado tallaabada. Muhiimadu waa in la jebiyo firfircoonida .. Waxaan rajeynayaa. Inta lagu jiro 2015, dhammaan distros waxay sameeyaan isbedelka ugu dambeeya.
Dhowr sano ka hor NVIDIA waxay sheegtay inaysan taageeri doonin Wayland, laga yaabee inay hadda bedeli doonto mowqifkeeda ..
Waxay u badan tahay, inuu beddeli doono maskaxdiisa haddii Valve lafteeda uu ku dhawaaqo taageerada Wayland.
waalka ayaa taageeri doona dhammaan qalabka aan hubo waan hubaa, in kasta oo taasi aysan ahayn waxa muhiimka ah, waxaa jira ciyaaro badan oo aan waalli ahayn oo kuwaani waa kuwa ay tahay in lala qabsado.
Waxay ahayd waqtigii qof lagu dhiirrigeliyey inuu ka boodo ...
Wayland / westin waxay horey ugujirtay nuskhadkeeda 1.5 final ama RC laakiin hadaadan bilaabin adeegsiga saxeexa weyn, waxay qaadan doontaa waqti dheer si loo xaliyo khaladaadka aan la helin. Daahfurka wayland waxay ka dhigan tahay in horumariyeyaashu bilaabeen inay dekedda ka dhigaan dhul-xeebeed.
Dhamaadka haddii aad rabto xasilloonida isticmaal noocyada LTS.
Ku jawaab obedlink
Annaguna Debianites waxaan hubaal ku heli doonnaa waddan laba nooc oo kale ah ... HAHAHA!
Iyagu waa qiimayaasha la bixinayo si loo isticmaalo aabbaha dhammaan distros iyo kuwa ugu xasilloon.
Ku jawaab nexus6
Debian ka ugu xasiloon?, Ehm ... iyo aabe?. Slackware waa midka ugu da'da weyn ee wali nool, oo ka soo jeeda SLS Linux.
Aniga ahaan, miiska xasiloonida wuxuu u egyahay sidan, inbadan iyo in kayar:
Debian maahan midka ugu da'da weyn laakiin waa tan iyo 1999
Debian waxay la timaaddaa in ka badan 37500 oo ah alaabooyin kala duwan oo barnaamijyo ah
Debian (sid) waxay taageertaa qaab dhismeedka: alpha (deked aan rasmi ahayn) amd64 arm64 (deked aan rasmi ahayn) armel armhf hppa (deked aan rasmi ahayn) hurd-i386 i386 kfreebsd-amd64 kfreebsd-i386 m68k (deked aan rasmi ahayn) mips mipsel powerpc ppc64 ) s390x sh4 (deked aan rasmi ahayn) sparc sparc64 (deked aan rasmi ahayn) Ma garanayo haddii aysan ahayn tan ugu taageerada badan
Debian waxaa ilaaliya bulshada waxayna doortaan hogaamiye 2dii sanaba mar
Slackware waa weyn yahay laakiin malaha kalabar barnaamijka Debian-ka, ma taageerto qaab dhismeedka Debian waxayna aad ugu tiirsan tahay Patrick Volkerding
Ku jawaab rolo
Desktop-ka ugufiican Linux: Abriil 2014 - Natiijooyin
LXQt: nooca ugu horreeya ee deegaanka ku milma LXDE iyo Razor-qt